Alshabaab oo weerar ka fulisay Gobolka Lamu ee dalka Kenya iyo Dad la gubay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo weerar ka fulisay Gobolka Lamu ee dalka Kenya iyo Dad la gubay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo weerar ka fulisay Gobolka Lamu ee dalka Kenya iyo Dad la gubay
Koox la sheegay inay Alshabaab ka tirsan yihiin ahaa Rag weerar ku qaaday degaanka Widho, waxayna halkaas lagu dilay dhow qof.
Weerarkan oo dhacay Subaxnimadii Isniinta ee 3-da Janaayo ayaa lagu dilay lix qof, degaanka Widho oo ka tirsan Galbeedka gobolka Lamu, markii koox Alshabaab ah ay qof degaanka ah qabsadeen, kadibna ku amreen inuu tuso dadka ay u socdeen.
Afar ka mida dadka la dilay ayaa la gubay oo dab la qabadsiiyey jirkood, halka labada kalena la sheegay inay jir dileen, kadibna ay toogteen xilli saq dhexe ah.
Ciidamada Booliska Kenya ayaa mar danbe goobta falku ka dhacay gaaray, waxayna bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo raggii dilka geystay.
Alshabaab ayaa hore u sheegatay inay qarax la beegsadeen gaari BG ah oo ay la socdeen inka badan 20 askari oo Kenyan ah, ayna dhammaantoodna halkaas ku dhinteen.
Previous articleJabhad shaacisay inay qabsatay Magaalada Beledweyne iyo maamul ay ka dhiseyso.
Next articleShirkii Golaha Wadatashiga Qaran oo ka furmay Muqdisho (Akhriso Ajendayaasha looga hadlayo)